फातिमा को भर्जिन को लागी प्रार्थना। ? चमत्कारी र शक्तिशाली! [+]
भर्जिनलाई प्रार्थना गर्नुहोस् फातिमा को; कुनै पनि आवश्यकता मा तपाईं यो प्रार्थना उठाउन सक्नुहुन्छ।
उनको धेरै प्रतिनिधित्व मध्ये एकमा भर्जिन मेरीको प्रेम र उदारता धेरै शक्तिशाली छ।
उनी, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टकी आमा र सबै चीजहरूको सृष्टिकर्ता, परमेश्वरको साथीको रूपमा, स्वर्गमा हाम्रो लागि बिन्ती गर्न सक्छिन् र हामीलाई चाहिने अनुमोदन वा चमत्कार प्राप्त गर्न सक्छिन्।
दैनिक प्रार्थनाहरू परिवारसँगै, घरमा, कार्यालयमा वा साधारण रूपमा गर्न सकिन्छ वाक्य बनाऊ सहज
महत्त्वपूर्ण कुरा यो विश्वासको साथ गर्नु यो निश्चित छ कि उनले हाम्रो कुरा सुन्दै छ र हाम्रो पुकाराको लागि सहयोग पुग्छ।
1 फातिमाको कुमारीलाई प्रार्थना फातिमा को भर्जिन को हो?
2 फातिमाको कुमारीलाई प्रार्थना
2.1 फातिमाको भर्जिनको प्रार्थना के हो?
3 म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
4 के यो कुमारीले मलाई मद्दत गर्नेछ?
फातिमाको कुमारीलाई प्रार्थना फातिमा को भर्जिन को हो?
भनिन्छ कि १ 1917 १। मा यस कुमारीलाई फ्रान्सिस्को, लुसिया र जैकिन्टाले देखेका थिए जसलाई फ्यातिमाको भर्जिनका तीन गोठालाहरू भनेर चिनिन्छ।
यो पोर्तुगाली शहरमा भयो जसमा कुमारीको एउटै नाम छ।
कथाको अन्य चाखलाग्दो विवरणहरूले बताउँदछ कि एन्जेल डी पोर्तुगाल भनेर चिनिने एक स्वर्गदूतले यस कुंवारीको उपस्थितिको लागि उनीहरूलाई तयार पार्ने मनसायले एक बर्ष अघि साना गोठालाहरूसँग कुराकानी गरे।
भर्जिनले यी गोठालाहरूलाई तीन रहस्यहरू प्रकट गरे, जसले बिस्तारै तिनीहरूलाई अन्य विश्वासीहरूलाई प्रकट गरे।
यो ज्ञात छ कि उत्तरार्द्ध 2000 मा कार्डिनल एन्जेलो Sodano द्वारा प्रकट गरिएको थियो।
सत्य यो हो कि उनको पहिलो उपस्थिति पछि, फातिमाको भर्जिन सबै हजारौं विश्वासीहरूले पछ्याउँछिन् संसार, व्यक्ति जो एक चमत्कार आवश्यक छ र यो कुमारी उहाँ आफैले शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ.
हे धन्य कुमारी, तपाईं बच्चाहरु को लागी बारम्बार देखा पर्नुभयो; म तपाईंलाई हेर्न, तपाईंको आवाज सुन्न र तपाईंलाई भन्छु: मेरी आमा, मलाई स्वर्गमा लैजानुहोस्।
तपाईंको प्रेममा भरोसा राख्दै, म तपाईंलाई तपाईंको छोरा येशू को एक जीवित विश्वास, उहाँलाई चिन्न र प्रेम गर्न बुद्धिमत्ता दिन, धैर्य र अनुग्रह मेरा भाइहरू उहाँलाई सेवा गर्न, र एक दिन स्वर्गमा तपाईं संग एक हुन सक्षम हुन को लागी।
हाम्रो बुबा, हेल मेरी र महिमा।
मेरी आमा, म पनि तपाईंलाई मेरा आमा बुबाको लागि सोध्छु, ताकि तिनीहरू एकसाथ मायामा बस्न सकून्; मेरा भाइहरू, परिवार र साथीहरूको लागि, ताकि एक दिन परिवारमा सँगै बसेर हामी तपाईंसँग अनन्त जीवनमा मजा लिन सक्दछौं।
म तपाईंलाई पापीहरूको रूपान्तरण र संसारको शान्तिको लागि विशेष तरिकामा सोध्छु; बच्चाहरूको लागि, ताकि तिनीहरूसँग कहिल्यै ईश्वरीय सहयोगको कमी हुँदैन र उनीहरूको शरीरहरूको लागि के आवश्यक छ, र एक दिनले अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ।
हाम्रो बुबा, हेल मेरी र महिमा हे मेरी आमा, मलाई थाहा छ कि तपाईंले सुन्नुहुनेछ, र तपाईंले मलाई यी पाउनुहुनेछ र कतिवटा ग्रेसहरू म तपाईंलाई भन्नेछु, किनकि म तपाईंको छोरा येशूप्रतिको तपाईंको प्रेमको लागि सोध्छु।
मेरी आमा, यहाँ तपाईंको छोरा छ, मेरी आमा हुनुहोस्! हे मेरी प्यारी हृदय, मेरो उद्धार हुनुहोस्!
फातिमाको भर्जिनको प्रार्थना चमत्कारिक छ।
मा पवित्र शास्त्रहरु, स्वर्गका बुबाले हाम्रा सबै प्रार्थनाहरूको उत्तर दिने वाचा गर्नुहुन्छ जब तिनीहरू विश्वास र हृदयबाट आउँछन्, अर्थात् इमान्दारीसाथ।
फातिमाको भर्जिनलाई सम्बोधन गरिएको प्रार्थनाहरूको सम्बन्धमा, यो प्रतिज्ञा अझ प्रबल हुन्छ किनकि हामी एउटी कुमारी मरियमको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्दैछौं जो येशूकी आमा हुन्।
यी सबै बाहेक यो तथ्य यो पनि हो कि यो भर्जिन तीन बच्चाहरू र त्यहाँबाट ती व्यक्तिहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई हामीजस्तै, आवश्यक छ र उनीहरूको जीवनमा ईश्वरीय हस्तक्षेपको आवश्यकता थियो।
त्यसोभए हामी यो विश्वास गर्न सक्छौं कि यो विगतमा भएको घटनासँगै अहिले पनि हुन सक्छ।
फातिमाको भर्जिनको प्रार्थना के हो?
फातिमा अफ भर्जिनको प्रार्थनाहरूको हाम्रो जीवनका केही क्षणहरूको लागि धेरै उद्देश्यहरू हुनसक्दछ, त्यसैले प्रार्थनाको शक्ति एक चीजमा सीमित हुन सक्दैन।
त्यसोभए हामी भन्न सक्छौं कि सबै प्रार्थनाहरू जस्तै यो पनि गर्न सक्छ कुनै समय मद्दत गर्नुहोस् हामीलाई आवश्यक छ.
चाहे चमत्कारिक उपचारको लागि, सुरक्षाको लागि वा कुनै अनुरोधको लागि, प्रार्थनाले प्राय जसो सेवा गर्दछ।
यसको जवाफ पाउन लामो समय लिन सक्दछ, किनभने ईर्ष्याले हामीलाई कहिले आशीर्वाद दिन्छ भन्ने कुरा जान्दछ, महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास गुमाउनु हुँदैन र यो कुरा पक्का गर्नुहोस् कि यस प्रार्थनाले पनि हामीलाई अनुभव गरिरहेको आँधीको बीचमा शान्तिले भरिदिएको छ र हामीलाई धेरै कुरा बुझ्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी पहिले बुझ्न सकेनौं।
म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
प्रार्थनाहरू कुनै पनि तरिकाले गर्न सकिन्छ, जबकि उपन्यासहरू सँधै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, परिवारहरूमा प्रार्थना वा विशेष प्रार्थना समय उद्देश्यहरू।
यद्यपि यी प्रत्येक फार्महरू धेरै तरीकाहरूमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र भित्र पनि सकिन्छ साथी वा परिवार को समूह.
यस बिन्दुमा त्यहाँ कोही छन् जोसँग कुनै समय विशेष प्रार्थना गर्ने ज्ञान छैन, यस अवस्थामा तपाईले कुनै पनि समय र स्थानमा विश्वासको साथ सरल, निष्कपट प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ।
विश्वासद्वारा हामी निश्चित हुन सक्छौं कि कुमारीहरू हामीतर्फ उपस्थित छन्।
के यो कुमारीले मलाई मद्दत गर्नेछ?
हो, जब तपाईंलाई यो आवश्यक हुन्छ।
उनी असल आमाको रूपमा आफ्ना बच्चाहरूलाई मार्गदर्शन गर्दछन् र ती अनुरोधहरू प्रदान गर्दछ जुन हाम्रो हृदयमा छन्।
ती मध्ये केही हामी जान्दैनौं तर हामीलाई तुरुन्त आवश्यक छ।
उहाँमा विश्वास छ चमत्कारी प्रार्थना फातिमा को कुमारी.
जुक्विलाको भर्जिनलाई प्रार्थना
ग्वाडालुपेको भर्जिनलाई चमत्कारी प्रार्थना